नेपाली प्रेमिका भेट्ननै भारतको कस्मिरबाट काठमाडौं आए यी युवक, कसरी बस्यो माया ? (भिडियो) – PathivaraOnline
Home > समाचार > नेपाली प्रेमिका भेट्ननै भारतको कस्मिरबाट काठमाडौं आए यी युवक, कसरी बस्यो माया ? (भिडियो)
admin December 12, 2018 समाचार	0
नेपाली प्रेमिका भेटन नै भारतको कस्मिरबाट काठमाडौं आए यी युवक, कसरी बस्यो माया ? हेर्नुस यी अजनबी युवक संग एक युट्युब च्यानलले गरेको यो भलाकुसारी, जसमा युवकले हिन्दीमै यसरि जवाफ दिन्छन।
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, उद्योग विभागदेखि सबै निकायलाई प्रभावमा पारी लाभकर नतिरी उम्किंदैआएको एनसेलले पछिल्लो समयमा अदालतमा रिट दायर गरी पटक पटक गरी ४० अर्ब रुपैयाँ मुनाफा विदेश लगेको बिषय पुनः उठेको समाचार दृष्टिमा छ ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिनासाथ फैसलाको पूर्ण पाठ नै प्राप्त नगरी राष्ट्रबैंकले हतार हतार मुनाफा लैजान डलर सटही सुविधा दिएको थियो । अदालतले आदेश दिए पनि फैसला राष्ट्रबैंकमा पुग्ने र अनुमति दिने प्रक्रियाका लागि कम्तीमा २÷३ महिना लाग्छ । तर अदालतले आदेश दिनासाथ राष्ट्रबैंकले एनसेललाई मुनाफा विदेश लान अनुमति दिएको छ । एनसेलको चास्नीमा राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपाल पनि डुबेको कुरा लेखासमितिका सदस्यहरुबीच चर्चा हुने गरेको छ । आर्थिक चलखेल नहुने अन्तरिम आदेश भएको भए त्यसको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रबैंकले महिनौं लगाउँछ । तर एनसेलमा अन्तरिम आदेश भएको केही दिनमै राष्ट्रबैंकले सटही सुविधा दिएर २३ अर्ब रुपैयाँ विदेश लान अनुमति दिएको थियो ।
संसदको सार्वजनिक लेखासमितिमा एनसेलको लाभकर नतिरी मुनाफा विदेश लगेको बिषय पुनः उठेको छ । एनसेलले ७० अर्ब पूँजीगत लाभकर नतिरी ४० अर्ब मुनाफा लगिसकेपछि थप ३२ अर्ब लाने प्रक्रियामा छ । आयकर ऐन अनुसार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा निश्चित धरौटी तोकिएको हुन्छ । तर एनसेलले आयकर ऐनको उल्लंघन गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुनाफा लान पाउने अन्तरिम आदेश दिएको छ । यदि भोलि अदालतबाट अन्तरिम आदेश खारेज भयो, एनसेलले लाभकर नतिरी मुनाफा लान नपाउने फैसला भयो भने त्यो विदेश गइसकेको रकम फर्काउन सकिन्छ ? यो प्रश्न राज्यका निकायमा बस्नेहरुले सोच्न नसकेका कारण नेपालबाट कमाएको सम्पत्तिको कर नतिरी एनसेल उम्किने भएको छ ।
अदालतको पूर्ण पाठ नआउँदै राष्ट्रबंैकले एनसेललाई मुनाफा लैजान अनुमति दिएको बिषयमा राष्ट्रबैंक समेत दोषी देखिएको छ । पछिल्लो पटक लेखासमितिले पुनः लाभकर असुली गर्न सरोकारवाला निकायका अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ । लेखासमितिका सभापति भरतकुमार शाहले दृष्टिसँग भने–लाभकर असुली गर्न हामीले निर्देशन दियौं । कर्मचारीले अदालतमा मुद्दा छ, कसरी अगाडि बढ्ने भन्दैआएका छन् । एनसेलले ४० अर्ब रुपैयाँ लगिसकेको छ । थप ३२ अर्ब लान खोजिरहेको छ । थप मुनाफा लान नदिन निर्देशन दिएका छौं ।
विगतमा पनि लेखासमितिमा सदस्य रहेका बेला भरतकुमार शाहले एनसेलबाट लाभकर असुली गर्ने पक्षमा स्पष्ट अडान राख्दैआएका थिए । उनै शाह अहिले लेखासमितिको सभापति भएका छन् । उनले एनसेलबाट लाभकर असुल्नेबारेमा सरकारलाई कति दबाब दिने हुन् कि गल्ने हुन् भन्ने कुरा आगामी दिनमा देखिनेछ । उनले यो बिषयलाई लेखासमितिमा उठाउनुले एनसेल प्रकरण पुनः बहसमा आएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि जनमतलाई ख्याल गर्दै देशको राजस्व नै गुम्न नदिने अपेक्षा गरिएको छ ।
बिहे भएको १ बर्षमै श्रीमान गुमाएकी गुल्मीकी एक्ली आमाको पुरा भयो सपना , बैनी भन्दा दिदि झन कमेडी। (भिडियो हेर्नुस्)
सरिता हत्यारा पतिको बयान ‘मैले छातीमा थिचेँ, बाले खुट्टा समाए अनि ….
७ वर्षका बालकको अ’पहर’ण पछि मागे बाउ र मामाले नै १ करोड फिराैती, यसरी गरियो ७ घण्टामै उद्दार